Fivoriamben’ny Asecna : tsara fiantohana ny zotra an’habakabaka eto Madagasikara | NewsMada
Fivoriamben’ny Asecna : tsara fiantohana ny zotra an’habakabaka eto Madagasikara
Voafidy handray ny fivoriamben’ny Asecna, andiany faha-60, i Madagasikara , ny volana jolay 2017. Tapaka izany taorian’ny fanatrehan’ny minisitry ny Fitaterana sy ny famantarana ny toetr’andro, Ramanantsoa Ramarcel Benjamina, ny fivoriambe natao tany Yaoundé,Cameroun, ny 30 jolay lasa teo.
Marobe ny tombontsoa ho azon’i Madagasikara amin’ny fandraisana io fivoriamben’ny Asecna amin’ny taona ho avy io, toy ny fifampizarana traikefa eo amin’ny samy firenena mpandray anjara, indrindra ny nahafaka an’i Madagasikara ao anatin’ny lisitra B, momba ny sidina miditra any Eoropa. Madagasikara sy Mauritanie ihany no tafavoaka ao anatin’ny lisitra B izany amin’ireo kaompaniam-pitaterana 230. Porofo izany fa voasokajy ho tsara fiantohana ny fitaterana an’habakabaka ny Nosintsika. Madagasikara rahateo no foiben’ny fitantanana ny faritra an’habakabaka eto amin’ny ranomasimbe Indianina.
« Hisy fivoarana lehibe io sehatra io manomboka izao. Raha 3% amin’izao fotoana izao ny zotra an’habakabaka eto amintsika, amin’ny taona 2029, hiakatra avo telo heny izany, araka ny fikarohana nataon’ny OACI*”, hoy ny minisitra Ramanantsoa Ramarcel Benjamina. Notsindriny koa fa sahanina tsara ny fanajana ny fiantohana sy fitandroana ny fitaterana an’habakabaka mialoha, mandritra ary aorian’ireo fivoriambe horaisin’i Madagasikara.
Jerena ny lafiny fizahantany
Efa manomboka miditra anatin’ny fotoan’ny fizahantany i Madagasikara amin’izao fotoana izao. Koa eo am-pitadiavana ny famatsiam-bola hoentina hanatsarana ireo fotodrafitrasa, toy ny seranam-piaramanidina, amin’izao fotoana izao ny minisitera. Tanjona ny hampitomboana ireo zotra mitondra mpizahatany miditra sy mivezivezy eto amintsika ; manana ny fahaiza-manao eo amin’ny fitiliana fiaramanidina mivezivezy eto ny teknisianina malagasy.
Jerena ihany koa ny fampitomboana ny fiaraha-miasa amin’ireo kaompaniam-pitaterana hafa ; ny fampidinana ny saran-dalana mankaty amintsika. Anisan’ny sakana iray lehibe ho an’ny fizahantany eto an-toerana izany, raha ampitahana amin’ireo sidina mankany amin’ireo Nosy manodidina.
OACI * : Organisation de l’aviation civile internationale